यस्तो रहेछ झगडाको मुख्य कारण ! शिल्पा आफैले खोलिन् सम्पुर्ण रहस्य -
यस्तो रहेछ झगडाको मुख्य कारण ! शिल्पा आफैले खोलिन् सम्पुर्ण रहस्य
काठमाडौं। (अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र उनका फिल्म निर्माता श्रीमान छवि ओझाबीच सतहमा आएको विवादको जरो घरेलु हिंसा भनिएको छ। शिल्पाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै प्रहरी गुहारेपछि हामीले दुबै पक्षका भनाइ समेटेका थियौं। बिहीबार मात्रै प्रहरीसमक्ष निर्माता ओझाले माफी मागेको समाचार आएको छ। यसैबीच, घटना र यसको सरोफेरोमा रहेर शिल्पा पोखरेलले नेपाल लाइभ सहकर्मी अनिल यादवसँग लामो वृत्तान्त सुनाइन्। बाँकी शिल्पाकै शब्दमा) यो खबर अनिल यादवले नेपाल लाइभका लागि तयार पारेका हुन् ।
असार ८ गते बिहान १० बजेको थियो, म दुईजना साथीसँग ‘कबिर सिंह’ फिल्म हेर्न जान्छु भनेर छवीजीलाई भनिरहेकी थिएँ। त्यो पनि नाइट शो होइन, बिहान ११ बजेको शो फिल्म हेर्न जान्छु भन्ने बित्तिकै उहाँले मलाई सोध्नुभयो, ‘को-को जान लागेको?’ जवाफमा मैले विनिता दिदी र उहाँको मामाको छोरीसँग जान लागेको जानकारी दिएँ। ल, ठिकै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेलै उहाँको मोबाइलमा कसैको फोन आयो, एक्कासी अनुहारको रङ बदलियो।
उहाँले फोन काट्नुभयो अनि सोध्नुभयो, ‘तँ नगएको भए कोसँग जान्थ्यो तेरो साथी?’ म गएको भएपनि, नगएको भएपनि ऊ उसको मामाको छोरीसँग जान्थ्यो होला। त्यो तपाईंले सोध्ने कुरै होइन नि भनेर मैले भनेँ। ‘को कोसँग जान्छ भनेर किन सोध्या? बरु तपाईंको प्लान के छ त्यो भन्नु न,’ मैले भनेँ। तपाईं, म र पृथ्वी जाने हो भने जाऔं, म उनीहरुसँग जान्न भनेँ। त्यसपछि उहाँ ‘होइन, भन् न भन्’ भन्दै झर्किन थाल्नुभयो। ‘तँ कोसँग कहाँ जान्छस्, मैले जानकारी त पाउनुपर्‍यो नि!’ भन्न थाल्नुभयो।
त्यो जानकारी त तपाईंलाई छँदैछ नि! ‘फेरि तीन महिनादेखि उहाँले मलाई गाडी नलैजा’ भन्न थाल्नुभएको थियो। त्यसैले बिहान कतै छोड्दिनुपर्‍यो भने उहाँले नै छोड्दिनुहुन्थ्यो, पिकअप पनि उहाँले नै गर्नुहुन्थ्यो। ‘कहाँ जान्छु, के गर्छु त्यो त तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ’ भनेर भनेँ मैले। त्यसपछि उहाँले एकदमै नराम्रो शब्द बोल्नुभयो। तँ र…, दिउँसै रंगौलिया मनाएर हिड्ने केटी। तँलाई मैले छोडिसकेपछि तँ कहाँ जान्छेस्, जान्छेस् नि! मलाई के थाहा?’ भन्दै नानाथरी बोल्न थाल्नुभयो।
यसरी नानाथरी गाली गरेपछि एउटा केटी मान्छेलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? त्यो शब्दको अर्थ के हो भनेर सोधेँ मैले। ‘तैँले मलाई हेपेको? म तेरो लोग्ने हो, मैले तँलाई जहाँ जान्छेस् भन्छु, त्यहाँ जान्छेस्, जहाँ जान्नस् भन्छु त्यहाँ जान्नस्’ भन्दै झम्टिन थाल्नुभयो। म त दुईजना केटी साथीसँग पो जान लागेको हो त। त्यो पनि तपाईं आफैंले मलाई त्यो ठाउँमा छोड्दिँदै हुनुहुन्छ भने के-को समस्या? तैपनि तपाईंलाई समस्या हुन्छ भने तपाईं पनि हिड्नु न त’ भनेर भनेँ।
मेरो कुरा सुन्नै चाहनुभएन। तैंले मलाई हेपेको? तैले मलाई हेपेको? भन्दै गालामा झ्याम्म झापड हान्नुभयो। मेरो गाला तात्तियो। झननन भयो।। कानमा ठूलो आवाज बज्यो। त्यसपछि म थचक्क चकटीमा बसेँ। मैंले बाहिर ल्याउने भए बिहे गरेकै कुरा ल्याऔं। नत्र यो लभसभको कुरा नगरौँ भनेँ। नत्र म तपाईसँग इन्टरभ्यू नै दिन्न भनेँ। रिलेसनलाई किन बिकाउने भनेर प्रश्न गरेँ।
उहाँले त्यतिबेला हानेको झापडले मेरो कानको जालीमा प्वाल पर्‍यो। डाक्टरले ‘हियरिङ’मा समस्या हुनसक्छ भनेको छ। साउन्ड चेक गराउन बाँकी छ। भोलि मैँले कान कम सुन्ने हो कि के हो, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। अहिले पनि चिसो खाँदा, तातो खाँदा कान एकदमै दुख्छ। मलाई पहिल्यैदेखि उहाँले धेरै कुरामा रोक्दै आउनुभएको थियो। अहिलेको पल्ट त अलि बढी नै भएको कारणले मात्रै म प्रशासनमा जान बाध्य भएकी हुँ।
अर्को ठाउँमा जाँदा शंका गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले म त्यही ठाउँमा जान थालेँ। म्यानेजरले नदेखेको बेला पनि म आफैँ ‘सर के छ हालखबर?’ भन्दै बोलाउन जान्थेँ। ताकी भोलि छवीजीले शंका गर्ने बाटो नहोस् भनेर। तर, पनि उहाँले शंका गर्न छाड्नुभएन। बिहे गरेको एक महिनापछि उहाँको कस्तो–कस्तो रुप देखियो। त्यो त मलाई बाहेक कसलाई थाहा होला?
उहाँबाहेक अरुको फिल्मको प्रमोसनमा हिड्दा पनि शंका गर्नुहुन्थ्यो। प्रमोसनमा जान्छु भन्दा ‘ए, एक महिनाको सुटिङमा तेरो लभ पर्‍यो त्यो सँग’ भन्दै नमिठो आरोप लाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले मलाई डर लाग्थ्यो प्रमोसनमा हिँड्न। उहाँको फिल्मको प्रमोसनमा हिड्दा म खुलेर बोल्न पाउने, हिरोसँग पनि खुलेर बोल्न पाउने। तर अरुको काम गरेको मुभी रिलिज हुन लाग्दा हिड्न नपाउने? सधैँ मै मात्र नराम्रो हुनुपर्ने?
फेरि ‘तँ जहाँ गएपनि मलाई केही फरक पर्दैन। सबै मेरै सपोर्टमा छन्’ भनेर सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसले मेरो मनोबल झनै कमजोर बनाउँथ्यो । तर, कतिन्जेल यसरी बाँच्ने? भित्रभित्रै दबिएर, पीडा लुकाएर कतिन्जेल खुशी हुने? मलाई सबैभन्दा बढी चित्त नबुझेको त, उहाँ चलचित्र विकास बोर्डको सम्मान थाप्न जाँदाखेरी हो।
मलाई धेरैअघिदेखि गरिएको व्यवहार घरेलु हिंसा हो, यस्तो गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने ज्ञान पनि थिएन। कानुन छ, कानुनले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि लाग्यो, ‘यो मान्छे सम्मान थाप्न लायकको हो र?’ भोलि मजस्तै धेरै युवती यसरी प्रताडित हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले म कानुनको शरणमा जानुपर्छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय उजुरी दिन गएँ।
उहाँको दोश्रो श्रीमती गीताञ्जली सुनुवारबारे सबैलाई थाहै छ। उहाँ त पूरै डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुभएको होला। अझ रेखा थापाबारे त थाहा नहुने को होला? उहाँसँग छुटिसकेपछि उहाँबाट पिल्सिएका कुरा रेखा दिदीले बाहिर ल्याउनुभएकै हो। तर, उहाँले छुट्टिनुअघि पिल्सिँदै गरेको अवस्थामै कानुनको शरणमा पुग्नुभएको भए आज मैले यस्तो दुःख पाउँदिनँ थिएँ कि जस्तो लाग्छ।
मैले घटना भएको १५ दिनसम्म किन उजुरी गरिनँ भन्ने प्रश्न पनि आयो। पाँच दिनसम्म त के गर्ने गर्ने भनेर मैले निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा नै थिइनँ। यसरी मार्नै आउँछ होला भन्ने त मैंले सोचेकै थिइनँ। माया गर्छु भनेर मेरो ममीड्याडीसँग हात मागेको मान्छेलाई आज मलाई यस्तो गर्दा के भयो होला?
यो कुरा बाहिर ल्याएपछि मिडियाले मलाई सपोर्ट गर्ने हो कि होइन, मेरो कुरा सुन्ने हो कि होइन, म त पूरै डरमा थिएँ। त्यसपछि मैले सबैसँग सल्लाह लिन थालेँ। हस्पिटलमा कान जँचाएको रिपोर्ट देखाउन थालेपछि केही सोसियल वर्करले ‘तिमीले गल्ती गरेको छैनौँ भने तिमीले न्याय पाउँछौ, कानुनले न्याय दिन्छ’ भनेर सल्लाह दिनुभयो।
मैले यो १५ दिनको बीचमा मलाई फकाउन आउनुहोला कि, माफी माग्नुहोला कि भनेर धेरै पर्खिएँ। तीन वर्षदेखि सहेर सँगै बसेकी थिएँ, त्यसैले अझै पनि आशा थियो। माया त गर्नुहोला जस्तो लागेको थियो तर फकाउन आउनु त परको कुरा, एक कल फोन पनि गर्नुभएन। एकपल्ट कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीका सिइओ प्रकाश पुरी दाईलाई पठाउनुभयो। उहाँले ‘पोलाइट वे’मा तपाईंको फिल्मी करिअर धरापमा पर्न सक्छ है’ भनेर जानुभयो।
‘हो, मैले गल्ती गरेँ, म माफी माग्छु, आइन्दा म यस्तो गर्दिनँ, अब घर जानुहुन्छ भने पनि म राम्रैसँग राख्छु, दुःख दिन्न’ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले डिएसपी साबलाई भनेँ, ‘म अन्तिम अवस्थामा अब मर्छु भनेपछि यहाँ आएको हो। यो तीन वर्षमा मैंले भोगेको यातना खुलाएर मैले निवेदन दिएको भए उहाँ कन्फर्म जेल पर्नुहुन्थ्यो।
तर, मैले चाहेकै ‘गल्ती गरेको स्वीकार्नुपर्‍यो र माफी माग्नुपर्‍यो’ र आइन्दा मलाई दुःख दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, मार्छु भनेर धम्क्याउने काम हुनुभएन भन्नेमात्रै थियो। गल्ती गरेको मान्छेले माफी त माग्नुपर्‍यो नि त? ठूल्ठूला मान्छेलाई फोन गर्न लगाएर पुलिसलाई फकाउन लाएर त कहाँ हुन्छ?
उहाँले मलाई ‘तपाई, तपाई’ भनेर सम्बोधन गर्दा डिएसपी सा’बले त उहाँलाई गाली पनि गर्नुभयो, ‘यहाँ इन्टरभ्यू दिएजसरी कुरा नगर्नुस्, बुढा–बुढी हो, घरमा जसरी बोल्नुहुन्छ, त्यसरी बोल्नुस्। तपाईं त डबल स्टयान्डर्डको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। तपाईंले बीचबीचबाट खुस्काइसक्नुभयो तपाईंले गरेको गल्ती।’ त्यसपछि उहाँ डराउनुभयो। पुलिस भनेको त पुलिस हो नि। उहाँले त ‘पोइन्ट, पोइन्ट’ पक्रिनुभयो। त्यसपछि उहाँले ‘अबदेखि म यस्तो गर्दिनँ’ भनेर लिखित माफी माग्नुभयो।
वकिलसँग पनि सल्लाह गर्छु। त्यसपछि मात्रै यो सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भनेर म भन्न सक्छु। हिजो रेखा दिदीहरु चुप लागेर बस्दा आज म पीडित भएँ। अब म पनि बोलिनँ भने भोलि अरु पिडीत हुने अवस्था देखियो। त्यसैले म बोल्न बाध्य भएको हो। रेखा दिदीलाई मैले एकपल्ट भनेको पनि थिएँ, ‘तपाई किन बोल्नुभएन त्यतिखेर।’
झन् उहाँलाई त अनुहारमा एसिड हाल्दिन्छुसम्म भनेको रहेछ। तैपनि उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो। मैले रेखा दिदीलाई यो कुरा राख्दा उहाँले ‘हामी छोरी मान्छे हो, भोलि बेइज्जत हुन्छ, भोलि फिल्म इन्डस्ट्रीमा गाह्रो होला’ भन्नुभयो। गल्ती गरेको मान्छेले माफी त माग्नुपर्‍यो नि त? ठूल्ठूला मान्छेलाई फोन गर्न लगाएर पुलिसलाई फकाउन लाएर त कहाँ हुन्छ?
मैले उजुरी दिएपछि धेरैजना मकहाँ छवीजीको बचाउ गर्न आउनुभयो। नाम नलिऔं, तर धेरैजना ‘पोलाइट वे’मा ‘तेरो करिअर ड्यामेज’ हुन्छ भनेर डर देखाउन आउनुभयो। फकाईफकाई तर्साएकोजस्तो लाग्यो। मैले सबैलाई ‘करिअर ड्यामेज भए केही छैन, विराटनगरमा मेरो बुबाको बिजनेस छ, त्यही सम्हालेर बसौँला’ भनेर पठाइदिएको थिएँ।
धेरैले सम्पत्तिको लागि यस्तो गरेको पनि भनिरहेका छन्। सम्पत्तिको लागि यस्तो गरेको भए म किन तीन वर्षसम्म यातना सहेर बस्थेँ, एक वर्ष नपुग्दै डिभोर्स दिन्थेँ होला नि त। तीनटा श्रीमती बिहे गरिसकेको बुढोसँग किन गएको भनेर कमेन्ट गर्नेहरु पनि देखेँ। तर मलाई के थाहा त्यतिबेला उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर। मलाई त उहाँ बहुत राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिबेला उहाँको प्रेम यति माथि थियो कि सायद रेखा दिदी आएर भनेको भए पनि म विश्वास गर्दिनँ थिएँ।
फिल्म निर्माता छविराज ओझाको चौथो वैवाहिक जीवन पनि धरापमा परेको छ। यो खबर कृष्ण आचार्यले नेपालखबरमा लेखेका छन् । २०७३ सालमा गुपचुपरुपमा आफैले सिनेमामा भित्र्याएकी नायिका शिल्पा पोखरेलसँग उनले गोप्य रुपमा विवाह गरेका थिए।
यो घटना १५ दिन अगाडि भए पनि बुधबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो। शिल्पाले श्रीमाले आफूमाथि घरेलु हिंसा गरेका आरोप लगाएकी छन्। शिल्पासँग विवाह गर्नुपूर्व छविले तीन विवाह गरेका थिए। यसअधिका तीन श्रीमतीमध्ये रेखा थापा र हेमाले सम्बन्ध बिच्छेद गरे भने गितान्जली सुनुवारले आत्महत्या नै गरिन्। यसरी हेर्दा छविको पारिवारिक जीवन र श्रीमतीसँग सम्बन्ध खासै सुमधुर रहेको पाइँदैन। हामीले यसै सन्दर्भमा उनको विगत केलाउने प्रयास गरेका छौँः
उनीहरूबीच खटपटको विषयमा प्रहरीले घरेलु समस्या रहेको जानकारी दिएको छ। स्रोतकाअनुसार शिल्पाले छविसँग डिभोर्स मागेकी छन्। छविले शिल्पालाई ‘लज्जा’ सिनेमाबाट ब्रेक दिएका थिए। त्यसयता उनले छविको ब्यानरमा ‘मंगलम्’ तथा ‘हवल्दार सुन्तली’मा अभिनय गरेकी थिइन। सिनेमामा आउनु अघि शिल्पा म्यूजिक भिडियोमा चल्तीकी मोडल थिइन्।
प्रकाशित मिति २७ असार २०७६, शुक्रबार ०३:५९